Galmudug oo Gaalkacyo ku qabatay nin Dil wadareed ka geestay Duleedka Muqdisho | Mudug24
Galmudug oo Gaalkacyo ku qabatay nin Dil wadareed ka geestay Duleedka Muqdisho
Ciidamada booliska dagmada Gaalkacyo ee gobalka Mudug ayaa maanta Ku guuleystay inay gacanta Ku soo dhigaan eedeeysane Aweys Cismaan Cabdi oo dilwadareed u geystay 5 Ruux todobaadkii la soo dhaafay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka KM13.
Taliyaha qeybta booliiska gobalka mudug Gaashanle dhaxe Qaasim Shirdoon Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa ka bixiyay soo qabashada eedeeysanaha isagoo xusay in dabagal dheer oo ay ku ogaadeen in xalay abaare 10-kii fiidnimo ama 4 Saac uu soo galay Gaalkacyo.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in aroornimadii saakay ay gacanta Ku soo dhigeen Isagoo dhanka Kalana Sheegay in Sharciga la horgeyn doono Sida ugu deg dega leh.
Gudoomiyaha gobalka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay howlaha shaqo ee Ciidanka booliiska gobalka Mudug ay u hayaan bulshada isagoo ugu baaqay Shacabku inay la Shaqeeyaan laamaha amniga si loo helo amni laysku haleyn karo.
Sagaalkii bishaan ayaa deegaanka KM 13 ayaa waxaa uu dil wadareed ugu geystay qof ka kooban shan ruux oo ay ka mid ahaayeen haweeneey oo ay hore u kala tageen nin qabay iyo aabaheed iyo sidoo kale dad kale oo ka tirsan qoyska.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo ku wajahan Caasimada Dhuusomareeb maalinta bari ah
Next articleTurkiga oo soo saaray Sharci Cusub oo saameenaya Dadka Ajaanibta iyo Somalida ee Dalkaasi Dagan